Nento yokugqoka iibhothi, iifoto ezingama-36. Nento yokugqoka amabhuthi kunye nebhobho ebanzi kwi-flat sole
Isalathisi esinqabileyo, i-wedge okanye i-style jockey style. I-fashionista nganye inayo "i-shoemaker" eyintandokazi ngexesha langoku kubanda. Kodwa indlela yokwenza umfanekiso wesitayile "wekati kwiibhuthi" phezulu kofezeko? - Okokuqala, kubalulekile ukubuza umbuzo othi: "Yintoni enokugqoka amabhuthi kule nkwenkwezi, ukujonga i-100%?" - Funda indlela yokukhetha izinto ezifanelekileyo zokugqoka iingubo - iimpahla kunye nezixhobo-ezihambelana nokubukeka kwefashini yakho.
Ngokuba mncinci kunye no-sonorous: imifanekiso engcono kunye neebhuthi
Izibhotshi eziphezulu zebhotshi azikho imodeli yazo zonke iintombazana. Abanikazi beempahla ezincinci, imilenze emide inokuzama kwizicathulo ngaphandle kokwesaba. Sifaka iibhothi nge-jeans-skinny, i-mini ekhweleyo kunye neengubo ezihlambulukileyo okanye i-sweaters epholile.
Kwaye kunye nabalandeli besitayela esomeleleyo sezoshishino - inhlanganisela yefestile kunye neengubo zokugqoka.
Enye indlela yefashoni yonyaka wokwindla-ebusika 2015-2016 ukugqithisa amabhuthi kumabhulu amancinci-kyulots.
Ikhumba lesibini: iibhuthi-iisitampu kunye nezindonga zendlela zesitalato
Iibhothi-iisitokisi ukuya phakathi kwethanga - ukukhala okufashiniweyo kweentsuku zamuva. Ezi zihlangu zifuna inkalipho ekhethekileyo kunye nokukwazi ukugqoka "izicathulo ezinzima" ezintle. Ngenxa yokuba iphutha elincinci ekukhetheni iimpahla kunokukhokelela kwi-fiasco epheleleyo, kwaye umfanekiso uya kubonakala ungasetekisi kunye nenhle, kodwa ucocekile kwaye ungenakulungiswa. Sifunda ukunxiba iibhothi eziphezulu ukusuka kubanikazi abaqapheleyo besitayela esingenakulungile - iMroslava Duma no-Elena Perminova. I-Beauties inikezela ukuzama kwiibhuthi eziphezulu ngeemfestile ezinomhlaza, iifutshane ezimfutshane ze-denim kunye ne-fired minired. Ukuhlawulela ubude obufutshane obude bengubo okanye iifutshane kunye nesambatho eside, i-cardigan engummangaliso okanye ijeketi ephathekayo emoyeni weCoco Chanel enkulu.
Kodwa abaqulunqi befestile bacela ukuzama kwiibhotshi eziphezulu ngeemoto ezihamba nge-motley suede ngengubo emnyama okanye ngeengubo ezimnyama zakudala, njengoBurberry noDavid But. Ngaba unesibindi kwaye unqwenela ukuzama? - Kule meko, kulungele ukuthobela ingqalelo kwiimodeli eziqhakazile ezivela kwiVersace, ezibukeka zinkulu kunye neefowuni ezinemibala emininzi yeetonti, kunye neengubo ezimnyama ezimnandi.
Indlela yokugqibela yesikhokelo - iibhothi-izitotyi ze-velor kunye ne-vinyl. Abaqambi badibanisa ngesibindi ngokugqithisa iingu-mini-A-silhouette zokugqoka kunye neengubo zoboya ezintle kwietoni.
Ingqungquthela engapheliyo yengubo yekwindla-ebusika, eyaziwayo phakathi kwefesistasta, iisitokisini zokubhukuda ngaphaya kwamadolo. Ukunxiba imodeli enjalo kunconywa ngeengubo ezikhanyayo ze-chiffon kunye nee-jeans ezithandayo.
Izintandokazi eziqatshelweyo: yintoni ukugqoka amabhuthi kunye ne-bootleg ephakamileyo kwedwa
Izintandokazi zeeblogi zefestile sele ziba zibhothisi zakudala ezivela eHermes naseGivenchy aziveli kwiimaphephancwadi ezigcobileyo kwaye zihlala zikopishwa yi-"mafirate". Iibhotshi zeHermes ezinamaqabunga e-branded kwi-boot, eyenziwa ngesitayela se-jockey esiphezulu. Umzekelo uzalisekisa ngokupheleleyo umfanekiso wesiphathamandla esicocekileyo, kwaye ujonge umfana wesikolo, kunye nesambatho kwisitayela esingaqhelekanga.
Into ebalulekileyo yeebhotshi zeGivenchy yintambo ephathekayo kunye ne-bootleg. Ezi zihlangu zibukeka zifana neengubo ezimfutshane neempahla zokugqoka, kunye neengubo okanye iimpahla zakudala.
Imfashiso yeRetro: yintoni ukugqoka amabhuthi ngokukhwela
Ukukhawuleza ujikeleze i-boot - umvuzo kwi-fashion retro, kwaye, ngokuchanekileyo, iibhotshi eziphezulu ezazithandwa kakhulu phakathi kwefesisti ye-Old World kwikhulu leminyaka ngaphambi kokugqibela. Namhlanje, ngenxa yeempawu ezidumiweyo emhlabeni, lo mzekelo ufumana ukuzalwa kwesibili. Iibhotile eziphezulu ze-lace ziza kukhangela ngokugqithiseleyo ngeengubo ezifutshane, iimpahla zokugada ezincinane, iingubo ezinzima okanye i-jeans, iifutshane ezinemikhono emfutshane kunye neengubo ezinqamlekileyo ezindizayo kwi-"boho-chic". Kwaye ekugqibeleni ekwindla nasebusika kubonisa uCloe, imodeli yefashoni yathatha kwiplanga kwiibhuthi eziphakamileyo ngeentambo ezinqabileyo kunye neenqwelomoya, ezigqoke iingubo ezincinci zambatho.
Owesifazana, onobugcisa kunye nemfashini: amabhoti aphezulu
I-heel-hairpin ayifuni kwifashini ebusika okanye ehlobo. Kwaye akukho nokuba ziphi izihlangu ozibekayo - izibhotshu okanye izicathulo - ngesigxina esihle kakhulu uya kuhlala uphezulu. Zombini ngendlela engqalileyo nangomfuziselo. Yintoni enxiba iibhothi kwi-hairpin kule nkwenkwezi? Iibhulophu azizange ziphephe ukudibanisa iindlwana ezigqibeleleyo kunye nezicathulo zasebusika ezineemifanekiso. Isongezelelo ngeebhuthi ezinokufakeka ngoku umfanekiso we "umnyama omnyama" okanye ikhekhe ephathekayo kwisitayela se "patchwork". Iingubo ze-shirt kunye nefowuni yefashini nazo zibalaseleyo "amaqabane" kwiibhotshi eziphezulu ze-high-heeled.
Iingqayi ezinezithende eziphezulu
Ziziphi iintlobo zeengubo zokugqoka ngee jeans?
Unokukhetha njani iibhola ezinobusika?
Iimfashini zanamhlanje ziva
Iingubo zeengubo ezide
Amaffleji nge rhubarb
Gemini: i-horoscope yokuwa kwe-2013
Isaladi kunye nenkukhu etshaya kunye ne-lavash
Ziziphi iimfazwe, kunye nendlela yokuzichonga
Yintoni enxiba izicathulo ezibomvu
Imifuno yamaminye eminqatha ngamabhakabhaka kunye ne-vanilla unamathela
Xa ubhalise kwiintlanganiso zebhinqa?